Gị na onye òtù ọlụlụ gị emeela mkpebi ahụ. Na-agba alụkwaghịm. Ma gịnị ga-eme? Nzọụkwụ mbụ dị mkpa mgbe mkpebi a dị oke mkpa bụ ịkpọ ndị ọka iwu ịgba alụkwaghịm. E kwuwerị, mgbe ịgbazi alụkwaghịm, ọ bụghị naanị ọtụtụ ihe bara uru kamakwa okwu ndị metụtara iwu na-ebilite: Gịnị ga-eme ụlọ nkwonkwo gị na izu ike ego, dịka ọmụmaatụ? Kedụ ka aga ahazi nkesa nkesa ego na nchekwa akụ? Whonyekwa ga na-elekọta ụmụ gị kwa ụbọchị ma ọ bụ nke ego? Iji nwee ike nyere gị aka dịka o kwere mee, ịhazi ma dekọba ihe niile gbasara iwu gbasara ịgba alụkwaghịm, ọ dị mkpa na onye ọka iwu ịgba alụkwaghịm gị nwere ozi na akwụkwọ niile dị mkpa.